မွောကျဒဂုံမွို့နယျ ၄၂ ရပျကှကျ ဦးဝိဇာရလမျး ဒဲ့ပေါကျ ရှိ အသငျ့နေ လုံးခငျြး ၂ထပျအိမျ ပရိဘောဂအပါ ငှားမညျ 40×60M(3) .L(2) AC(8) မီတာ၂မြိူး ရေ၂မြိုး ၁လ ၁၀သိနျး ၁နှဈခြုပျ စပျေါ ၁လစာ 09773264499...0943105844...09795517415...09892007224...0943170017. - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့ သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 10 သိန်း (ကျပ်) - R-18223736 | iMyanmarHouse.com
မွောကျဒဂုံမွို့နယျ ၄၂ ရပျကှကျ ဦးဝိဇာရလမျး ဒဲ့ပေါကျ ရှိ အသငျ့နေ လုံးခငျြး ၂ထပျအိမျ ပရိဘောဂအပါ ငှားမညျ 40×60M(3) .L(2) AC(8) မီတာ၂မြိူး ရေ၂မြိုး ၁လ ၁၀သိနျး ၁နှဈခြုပျ စပျေါ ၁လစာ 09773264499...0943105844...09795517415...09892007224...0943170017.
3 Mar 2020 12:07 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်
143 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး |	ကြော်ငြာနံပါတ် R-18223736
လုံးချင်းအိမ်4ခန်3းခန်း
10 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)
မွောကျဒဂုံမွို့နယျ ၄၂ ရပျကှကျ ဦးဝိဇာရလမျး ဒဲ့ပေါကျ ရှိ အသငျ့နေ လုံးခငျြး ၂ထပျအိမျ ပရိဘောဂအပါ ငှားမညျ
40×60M(3) .L(2) AC(8)
၁လ ၁၀သိနျး ၁နှဈခြုပျ
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18223736 အတွက် Home Group Real Estate သို့ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Ad Number R-18223736
စိန္တကျော်သူဦးသြလမ်းတွင် (80×60) အကျယ်ရှိ 2RC လုံးချင်းအိမ်အမြန်ငှားမည်။
လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားရန်ရှိပါသည် ကျွန်းရွှေဝါလမ်း (၃၄)ရပ်ကွက်
အောင်သုခလမ်းတွင် ( 40×60 ) အကျယ်ရှိ 1RC လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်။
မွောကျဒဂုံမွို့နယျ ခမျြးသာရှပွေညျအိမျယာဝနျးရှိ နရောကောငျး လုံးခငျြးအိမျအမွနျ ဌားမညျ
လုံးချင်းအိမ် အမြန်ငှားရန်ရှိပါသည် ချမ်းသာရွှေပြည်အိမ်ရာ
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်,လုံးချင်းအရောင်း (hs 01185) ပင်လုံလမ်းအနီး သင်းဝင်းလမ်းအနီးတွင် တည်ရှိသည်.
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် PILON CONDO အခန်းလေး ငှါးမည်။
30 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)
လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည် (HE - R0107D)